Camay oo $200,000 ka Guddoomay Guddiga Abbaaraha Heer Qaran – Radio Daljir
May 26, 2017 3:39 g 0
Madaxweyne Kuxigeenka Puntland Cabdixakiim Cabullaahi Xaaji Cumar waxa uu $200,000 maanta ka guddoomay Maamo Batuulo Gaballe oo xubin ka ah Guddiga Abaaraha Heer Qaran oo Garowe soo gaartay.
Lacagtaan waxaa ku deeqay Walaalo Soomaliyeed oo soo marsiiyay guddiga Heer Qaran, waxaana loogu talagalay in lagu caawiyo dadka abaarta ka soo doogay ee xoolihii dhaafeen.
Wasiirka Wasaarada ganacsiga ee Puntland Cabduweli Xirsi indhaguran oo kamid ah Gudiga Gurmadka abaaraha Heer Qaran oo ugu horeyn ka hadlay madasha lacgtan lagu deeqayeey Puntland ayaa soo dhaweyeey wafdigan oo ka koobna afar xubnood oo kasocda Gudiga gurmadka abaaraha Dowladda federaalka ee somaaliya.
Batuulo Gaballe oo kamid ahayd wafdigi kasocday Gudiga abaaraha Heerqaran ee dowladda faderaalka ayaa sheegtay in lacagtan gaaraysa $200,000 ee kun logu tala galay dadkii abaartu samaysay ee ku sugan Puntland,waxayna sheegtay in lacagtan somali iska soo aruurisay.
Ugu dambeyn Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo kala wareegay gudiga lacagtan ayaa sheegay in la iskula xisaabtamayo lacagtan Puntland horey lacagihii usoo gaaray ay si wanaagsan u gaarsiyeen dadkii abaaruhu sameyeen .
Hoos ka dhegayso warbixinta oo uu inoo hayo Maxamed Lakiman, Daljir Garoowe.
Madaxweyne Dooran Xaaf oo Cadaado lagu soo Dhaweeyey